Obodo kachasị mma na Mallorca: Site na Pollensa ruo Valldemosa | Njem akụkọ
Kwuo maka obodo kacha mma na Mallorca pụtara ime ya site n'ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri na osimiri na nrọ nrọ, kamakwa nke ime ụlọ ndị ọzọ yiri ka agbakwunyere na ihe dị oké ọnụ ahịa Ugwu Tramontana na agba-kwa-ra ya gburugburu.
N'ihi na agwaetiti Balearic a bụ ihe ịtụnanya na ị kwesịrị ịma. Isi obodo mara mma nke ukwuu Palma de Mallorca, ya na nnukwu katidral ya na nnukwu ụlọ Bellver ya. Ma, ikekwe, ọbụna mma karịa bụ ime obodo nke na-echekwa, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọdịnala oge ochie na ihe ncheta na-enweghị atụ. Ma, nke ka nke, na ọ na-enye gị udo nke àgwàetiti a nke onye na-ede uri na-ezo aka na ya. Santiago Rusinol. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata obodo ndị mara mma na Mallorca, anyị na-agba gị ume ka ị gaa n'ihu na-agụ akwụkwọ.
1 Deià, ihe ndọta maka ndị na-ese ihe
2 Valldemosa, nke kachasị ewu ewu n'etiti obodo ndị mara mma na Mallorca
3 Alcudia, akụkọ ihe mere eme na osimiri
4 Sóller na ụgbọ oloko ndị njem nlegharị anya ya
5 Fornalutx, ọ bụghị naanị otu n'ime obodo kachasị mma na Mallorca
6 Pollensa, odida obodo na steeti ya dị ọcha
Deià, ihe ndọta maka ndị na-ese ihe
Ụlọ ihe ngosi nka nke Robert Graves na Deià
N'ịbụ nke dị na Sierra de la Tramontana, obodo Deià bụ omenala ndị nka sitere na ngalaba dị iche iche ahọrọla ibi ndụ na ịrụ ọrụ. N'ime ha, ndị na-ese ihe na-amasị Picasso o Stephen French na ndị na-eme ihe nkiri dị ka Peter Ustinov. Mana onye ama ama n'ime ha bụ onye edemede Britain Robert Graves, edemede nke M, Claudio.
Ụlọ ebe o biri ọtụtụ oge ná ndụ ya bụzi ihe ngosi nka. Ma ọ bụghị naanị ya. Ị nwekwara ike ịga leta Archaeological, Parish, nke a raara nye onye na-ese ihe Norman Yanikun ma ọ bụ nke Ha bụ Marroig, dị na ọmarịcha ala nke Archduke Louis Salvador nke Habsburg-Lorraine nke na-agụnye ebe obibi ndị mọnk na otu n'ime echiche kachasị dị egwu n'àgwàetiti ahụ dum: nke dị n'ihu nkume ahụ. Sa Forada.
Banyere ihe ncheta ya, ihe mbụ ga-adọrọ mmasị gị bụ ụlọ nkume aja aja ya. Ma anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na chọọchị nke San Juan Bautista, nke ụlọ elu ya nwekwara ọrụ nchekwa n'akụkụ echiche Los Cañones, nke dị n'akụkụ ọnụ ụzọ ma na-enye echiche dị ebube banyere oke osimiri Majorcan.
N'ihi na ọmarịcha obodo a nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku mmadụ bi nwekwara oke osimiri. N'ezie, ị nwere ike ịnụ ụtọ osimiri dị ka nke Cala Deia y Cala Es Canyaret, onye mmiri na-acha anụnụ anụnụ turquoise ga-amasị gị.
Valldemosa, nke kachasị ewu ewu n'etiti obodo ndị mara mma na Mallorca
Ọ bụrụ na Deià masịrị Robert Graves, Valldemosa tụrụ onye na-agụ egwu ịhụnanya anya Frederic Chopin na onye mmekọ ya, n'oge ahụ, onye edemede George ájá. Ha abụọ nọrọ otu oge na nnukwu akara nke obodo a: ụlọ ọrụ ya. N'ihi nke a, onye edemede ahụ bipụtara Oge oyi na Majorca na Chopin dere ya Na-ebu ụzọ Opus 28.
Valldemosa dịkwa na Sierra de Tramontana, n'ókè ya kpọmkwem na Deiá. Ọ bụ a mara mma obodo na warara cobbled n'okporo ámá nke Churchka nke San Bartolomé, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na-esote canons nke Gothic, ọ bụ ezie na agbanwegharịrị nke ukwuu na XNUMXth na n'afọ. Ụlọ nke Saint Catherine Thomas.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na Municipal Museum (na Charterhouse n'onwe ya), nke ụlọ na-arụ ọrụ site na Joan Miro; Ogige ndị eze Juan Carlos; echiche nke Sa Miranda dels Lledoners, nke na-enye echiche dị egwu banyere obodo ahụ, yana ebe obibi nke Santísima Trinidad, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX.
Ma, dị ka anyị na-ekwu, nnukwu akara nke obodo a mara mma bụ Royal Charterhouse nke Valdemossa. Ewuru ya ka ọ buru ulo uku eze Sancho I nke Majorca, e nyere ndị mọnk na 1399. Ọ bụ nnukwu nnukwu ihe mgbagwoju anya nke, na mgbakwunye na ebe obibi ndị mọnk ochie, chọọchị, nke neoclassical invoice, cloister, ochie pharmacy na sel pụta ìhè. Ụlọ nke ikpeazụ, na mgbakwunye na ihe atụ nke ndụ ọdịnala nke ndị Carthusians, obere ihe ngosi nka nke a raara nye Chopin na George Sand.
Alcudia, akụkọ ihe mere eme na osimiri
Ọnụ ụzọ ámá Moll, na mgbidi Alcudia
Anyị na-ahapụ ugwu ahụ ruo nwa oge ka anyị na-aga n'ime obodo ndị mara mma nke Mallorca dị n'ụsọ oké osimiri. Kpọmkwem, anyị gara Alcudia, emi odude ke n'ọnụ mmiri na-emechi, n'otu akụkụ, na Corporal Farrutx. Ya mere, ọ na-enye gị ụfọdụ n'ime osimiri kachasị mma nke agwaetiti Balearic. N'ime ha, nke njem nlegharị anya n'onwe ya, nke Sant Joan, nke Sant Pere ma ọ bụ nke S'Ilot, na Cape La Victoria.
Ma nnukwu ịma mma nke Alcudia dị n'obodo ahụ n'onwe ya, nke obodo ochie ya na-ejigide ọdịdị ochie ya. Ha rampi site na narị afọ nke XNUMX bụ ndị kasị mma na-echebe n'àgwàetiti ahụ. Ha nwere ụlọ elu iri abụọ na isii na ọnụ ụzọ anọ: Mallorca, Moll, Vila Roja na Portela. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya niile ịma mma, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na Parapet ije, nke na-enyekwa gị ọmarịcha echiche nke mmiri nke pollensa.
Ma ị kwesịkwara ịga na obodo a Parish Church nke Sant Jaume, nke ị ga-ahụ ka ọ na-eme njem n'okporo ụzọ dị warara ma dị warara nke etiti ahụ. Na, ugbua na mpụga, ị ga-ahụ Ebe Rome nke Pollentia oge ochie, bụ́ obodo e wubere na narị afọ nke abụọ Tupu Oge Ndị Kraịst.
N'aka nke ọzọ, Alcudia bụ ebe mmalite dị mma maka ịzọ ụkwụ n'ụzọ dị egwu Albufera Natural Park. Ị nwere ụzọ njem anọ nwere akara nke ọma nke ogologo dị iche iche. Ma, ọ bụrụ na-amasị gị n'oké osimiri, ị nwere ike ịga njem ụgbọ mmiri gburugburu n'ọnụ mmiri. Ọ na-enyekwa gị ọmarịcha echiche. Ma, ọ bụrụ na ị na ụmụaka na-eme njem, ị nwere ike ịkpọrọ ha gaa n'ogige mmiri nke ị ga-ahụ na mmiri mmiri.
N'ikpeazụ, anyị na-adụ ọdụ ka ị hụ na Alcudia CAsa museum Yannick and Ben Jakober, na ọmarịcha ubi ya, ihe ọkpụkpụ na ọrụ nka ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ dị n'ihu oké osimiri ma na-enye gị ọmarịcha foto nke Mediterranean.
Sóller na ụgbọ oloko ndị njem nlegharị anya ya
Ugbu a, anyị rutere n'obodo Sóller mara mma. Ma, ọ bụrụ na-ịchọrọ, anyị nwere ike ime ya site na ọmarịcha ụgbọ oloko ndị njem na-ejikọta ya na Palma de Mallorca. Ọ na-echekwa locomotive na ụgbọ ala mbụ sitere na 1912 wee gafee Sierra de la Tramontana akpọtụrụla na-enye gị ọmarịcha ala. Dị ka a ga - asị na ihe a niile ezughi oke, ọdụ ụgbọ oloko ị rutere nwere ihe ngosi a raara nye eserese site na Joan Miro ugbua seramiki nke Picasso.
Ozugbo n'ime obodo a, ị ga-agakwuru Iwu Plaza, ya ezi akwara center. N'ime ya, ị ga-ahụ chọọchị nke San Bartolomé, ụlọ nsọ nke malitere ịrụ na narị afọ nke XNUMX, ma ugbu a nwere ọmarịcha facade nke ọgbara ọhụrụ. Ọzọkwa, n'ime, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ Gothic na Baroque altarpieces.
Na square ị ga-ahụkwa ụlọ ndị Ụlọ Nzukọ Alaeze na site na ụlọ akụ a ma ama, nke ikpeazụ bụ ihe owuwu modernist. Mana, ọ bụrụ na ị gachara ụgbọ oloko, ị nọ na-achọ ịga n'ihu na ụgbọ ala ọdịnala, ị nwere ike iburu ya trolley ụgbọ ala nke na-agafe square ahụ wee kpọga gị n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Agbanyeghị, buru ụzọ gagharịa gburugburu Sa Lluna Street, juputara na ubi nzuzo mara mma na ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta mpaghara. N'otu aka ahụ, n'otu n'ime njedebe ya bụ Can Prunera Museum, dị na ọmarịcha ụlọ ụlọ nka nouveau. N'elu ala, a na-echekwa arịa ụlọ ọgbara ọhụrụ mbụ na, na nke mbụ, nchịkọta ọrụ nke ndị ahụ e kwuru n'elu. Picasso, na Kandisnky na Warhol.
Fornalutx, ọ bụghị naanị otu n'ime obodo kachasị mma na Mallorca
Fornalutx, otu n'ime obodo mara mma na Mallorca
Anyị akpọpụtala oghere a raara nye ụlọ a n'ụzọ dị otú a n'ihi na, n'ezie, ọ bụghị nanị otu n'ime ihe ndị kasị mma na Mallorca, ma a na-ewerekwa ya dị ka otu n'ime ndị kasị mma na Spain. Ọ bụ kpọmkwem n'etiti Ndagwurugwu soller nke, mgbe oroma na lemon osisi oge ntoju, na-enye gị ihe na-enweghị atụ odida obodo na Onye isi obodo Puig.
Fornalutx mebere otu okporo ámá dị warara nke na-arịgo na ala ma bụrụ nnukwu ụlọ ndị e ji nkume wuo. Nke kacha dị egwu bụ Ọnụ ego nke Mallol, nke bụ n'ezie steepụ ogologo. Site n'okporo ụzọ ndị a, ị ga-erute Ụlọ Nzukọ Alaeze, onye na-ebu ibu na-eche ya nche ụlọ nchebe Narị afọ nke XNUMX.
Kwesịrị ị na-eleta ndị Ụka Fornalutx, wuru na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na, mgbe ọtụtụ mgbanwe gasịrị, ọ nwere njirimara baroque. Na nke ụlọ mara mma nke Can Xoroi, nke nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie a raara nye foto akụkọ ihe mere eme n'obodo ahụ na nka nke taịlị a na-ese, omenala malitere na narị afọ nke XNUMX.
Pollensa, odida obodo na steeti ya dị ọcha
Mgbago ugwu El Calvario, na Pollensa
Ọ bụghị ihe ndaba na obodo a bụ ọkacha mmasị nke ndị na-ese ihe na-eleta Mallorca n'ihi na odida obodo ya, na-achịkwa ya. Cape Formentor, dị egwu n'ezie. Ọzọkwa akụkụ ya bụ mgbago na Ugwu Calvary, nke nwere nzọụkwụ 365 na-agba ọsọ n'etiti osisi cypress, ụlọ ime obodo na ihe ọkpụkpụ. Ozugbo ị bilitere, ị gaghị akwa ụta maka mbọ ahụ n'ihi na ị ga-enwe ọmarịcha echiche banyere agwaetiti ahụ.
Mana ị ga-agakwa na Pollensa the parish ụka nke Nne nke Chineke nke ndị mmụọ ozi, nke dị na Plaza Mayor. Ọ bụrụ na ị gaa n'obodo ahụ na Sunday, na mgbakwunye, a na-eme ahịa omenala mara mma na square a. Anyị na-adụ ọdụ ka ị hụkwa Akwa mmiri Rome, nke ebe nsọ nke Puig de Maria, nke ebe obibi ndị nọn Santa Maria, nke ụlọ ndị Museum nke Pollensa, na Ụlọ ihe ngosi nka nke Dionis Benassar, ebe a mụrụ Majorcan ese.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ n'ime obodo kacha mma na Mallorca. Ma, n'ezie, àgwàetiti ahụ dum bụ odida obodo na nnukwu ọla. Dị ka ihe atụ, anyị nwekwara ike itinye aka na njem anyị Atáha na-amanye ọgba; balyanbufar, ya na mbara ala ubi-vine ya, ma ọ bụ Capdeper, nke nwere mgbidi ya na narị afọ nke XNUMX. Ọ naghị amasị gị ịnụ ụtọ ihe ịtụnanya ndị a niile?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo kachasị mma na Mallorca